सबै ठिकठाक चलिरहेकै छ | शहरबाट शब्दहरु
« निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर
सपनाभित्रको ‘सुन्दर संघर्षहरू’ »
सबै ठिकठाक चलिरहेकै छ	३१ असोज, २०७१
मलाई थाहा छ अहिले समय ठिकठाक चलिरहेको छ । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा अनेक तनावले टाउको उठाएको थियो । अनलाइन पत्रिका दैनिकभित्रको आयले अनलाइन पत्रिकाकर्मीलाई खुशी बनाउन सकिएको थियो । तरपनि केहीका अनुहार मलिन र उदाश थियो । कार्यालयबाट बिना जानकारी बिदा बस्ने र कामलाई प्रभाव पारेकोले हाजिरी हेरेर पारिश्रमिक थपघट गरिएको थियो ।
यस्तै यस्तैमा दशैं कट्यो । अहिले तिहार नजिकै छ । दशैंकै कुरा गर्दा केही साथीहरूले कार्यालयको अवस्था हेरेर मौनता मात्रै सम्हाले । हामीले प्रयत्नमात्रै होइन, पूरै प्रयास गरेका थियौं । तरपनि सकेजति प्रयास खेर गयो । आफ्नै पर्नेलाई समेत गुहारे । तर हुन्छ भनेर झुक्याए । साथीहरूलाई सम्झाउन सके । तिहार राम्रो बनाउने भनेर सहमति गरियो ।
कार्यालयबाट दशैं सकिएपछि संवाददाता #श्रृजना_बास्तोला बिदा भइन । साथै, केही महिना हामीसँग आवद्ध भएकी #बिनु_सुवेदीपनि बिदा भइन । पत्रकारिता क्षेत्र यस्तै हो, जुट्ने र फुट्ने भइरहन्छ । किनकी पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै चित्त नबुझ्ने कुराहरू छन् । धेरै कुरा मनले मानेपनि समाज र बाध्यताले स्विकार्न सक्दैनन् । यस्तै यस्तै भयो । अहिले यतिमात्रै । अस्तु
This entry was posted on अक्टोबर 17, 2014 at 11:08 बिहान and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.